IYunivesithi ye-Fairfield: I-Acceptance Rate kunye neNinzi
Imali yokwamkeleka, iNcedo lwezeMali, kunye nokuNinzi
Ngomlinganiselo wokwamkelwa kweepesenti ezingama-61, iYunivesithi ye-Fairfield ayikho isikolo esikhethiweyo. Abafundi baya kufuna amabanga aqinisekileyo kunye nesicelo esomeleleyo sokwamkelwa. Abafundi abanomdla bangathumela isicelo ngesicelo esiqhelekileyo, kwaye kufuneka bathumele kwiincwadi eziphezulu zezikolo kunye (kunye nokhetho) i-SAT okanye i-ACT izikolo.
I-Fairfield University Acceptance Rate: 61%
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo we-Fairfield
IYunivesithi ye-Fairfield yiziko lama-Jesuit epheleleyo kwi-Fairfield, Connecticut. Ikharityhulam yeyunivesiti igxininisa ukucinga kwimida yoluleko. Isikolo sinenkqubo eziqinileyo zamazwe ngamazwe kwaye ivelise inani elimangalisa labafundi beFulbright. Amandla ka-Fairfield kwizobugcisa kunye nenzululwazi ye-liberal yafumana isikolo isahluko se- Phi Beta Kappa, i- Honor Society, kunye neYunivesithi yase-Dolan School yezoRhwebo nayo ithathwa kakuhle. Kwiimidlalo, i-Fairfield Stags incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Conference Atlantic Athletic Conference.
Ubhaliso lwabonke: 5137 (4,032 izifundo zakudala)
Isifundo kunye neMali: $ 46,000
Iincwadi: $ 1,150 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 13,860
Ezinye iindleko: $ 1,730
Iindleko ezipheleleyo: $ 62,740
Uncedo lwezeMali zeYunivesithi yaseFirfield (2015 - 16)
Izibonelelo: $ 22,154
Imali: $ 9,171
I-Popular Majors: I- Accounting, Izifundo zoNxibelelwano, isiNgesi, ezeMali, ukuThengisa, ukuNyango, i-Psychology
Ireyithi yokutshintshwa: 15%
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola lebhoksi, iLasrosse, iNgcahla, ukuDoba kunye nokuDaza, Umkhondo kunye nensimu, iTennis, igalofu, i-Baseball, ukukhwela
Ezemidlalo zaBasetyhini: Ibhola lebhola, Ukubhukuda kunye nokuDoba, iVolleyball, Izwe eliphambeneyo, iTennis, i-Softball, iBhola yeBhola, i-Track and field, Ukukhawula
Ukuba uthanda iYunivesithi ye-Fairfield, Unako ukufana nalezi zikolo
Inkcazo yeeNkcazo zeYunivesithi ye-
Isitatimende esipheleleyo semisebenzi singatholakala kwi http://www.fairfield.edu/aboutfairfield/missionvalueshistory/missionstatement/
"IYunivesithi ye-Fairfield, eyasungulwa nguMbutho kaYesu, iziko elihlangeneyo lokufunda ephakamileyo eneenjongo eziphambili ekuphuhliseni ubunako bokufunda bengabafundi bayo kunye nokukhuthaza ukuziphatha ngokuziphatha kunye nenkolo kunye nomoya wokuziphendulela kwezenhlalakahle. eyaqala ngowe-1547, iyakwenziwa namhlanje kwinkonzo yokholo, apho ukuphakanyiswa kobulungisa kuyimfuneko enkulu. "
Iingxaki eziqhelekileyo zokusabalalisa
I-WrestleMania - Iinkcukacha ze-Wrestler ezingaqhelekanga, iiRekhodi, kunye nezibalo
Izipho eziphezulu zePolitiki Gag zeeholide
UStefano DiMera Kufa Kwabaninzi 'Kwiintsuku Zethu Zokuphila'